May Nyane: မုန်တိုင်းရဲ့ ကျောရိုး
ကျမ အသက် ၂၂နှစ် (၁၉၈၇)မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုပါ။ စိစစ်ရေးကြောင့်ဆိုပြီး ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းတိုက်မှာ ၂နှစ် အောင်းနေခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုပေါ့။ ဦးဝင်းငြိမ်းက သူ့ရဲ့ ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း ပထမဆုံးအုပ်မှာ ရအောင် ထည့်မယ် ဆိုပြီး တင်လိုက်တာမှာ တကယ် သုံးလို့ရခဲ့ပါတယ်။
ကြည့်လေ၊ ရှင်ဆို ကိုယ်တိုင်က ထက်မြက်မာကျောတဲ့ မိန်းမကို သဘောကျတယ်ဆိုပြီး ကျမကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဟော… ဒီကနေ့ကျတော့ “မင်းဟာ မာနကြီးလွန်း၊ မာကျောလွန်းတယ် ထရီဇာ၊ ကိုယ်ဟာ ယောက်ျား၊ အိမ်ထောင်ဦးစီး၊ ပြီးတော့ မင်းရဲ့ရှေ့က ရပ်တည်ဖို့ အရည်အချင်း အပြည့် ရှိတယ်။ နေရာတကာ ကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးတာ ကိုယ်မခံယူနိုင်ဘူး ထရီဇာ”လို့ ပြောလာပြန်တယ်။ ကျမကို ရှင် အဲဒီိလို ပြောတိုင်း ကျမ စဉ်းစားတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်တယ်။ ကျမကတော့ နဂို ‘ထရီဇာဘဦး’ ကနေ ‘ထရီဇာအောင်ရဲ’ ဖြစ်လာတာသာ ရှိမယ်။ ကျမရဲ့ စရိုက်၊ ဗီဇ၊ အမူအယာ၊ အပြင်အဆင်တွေကတော့ ဘယ်လိုမှ မပြောင်းလဲခဲ့ဘူး ထင်တာပဲ။ ထင်တယ်ဆိုတာထက် ယုံကြည်တယ်။ ထရီဇာဆိုတဲ့ မိန်းမက နဂိုကတည်းက ထုံထိုင်းတဲ့ မိန်းမမှ မဟုတ်ဘဲ ကိုအောင်ရဲ။ ရှင်နဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီး နိုင်ငံတကာရေးရာတွေ၊ နိုင်ငံတကာစာပေယဉ်ကျေးမှု တွေ၊ ဆွေးနွေးနေခဲ့တဲ့ မိန်းမလေ။ ရှင် အင်မတန် မက်မော မြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ ရှင့်ရဲ့မိန်းမပဲ။ ပိုပြီး တိတိကျကျ ပြောရရင် ရည်းစားတွေ အများကြီးထဲက ရှင် ဆန်ကာတင်ရွေးခဲ့တဲ့ မိန်းမပဲ။ ခုတော့ ရှင်မြတ်နိုးပါတယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ထက်မြက်မာကျောမှုကိုပဲ ရှင်က မကြိုက်ပြန်ဘူးတဲ့။ ရှင်ကသာ စိတ်မူမမှန်ခဲ့တာပဲ။ ဖေါက်ပြန်ခဲ့တာပဲ ကိုအောင်ရဲရယ်။ ကဲ.. ရှင် ရယ်စရာကောင်းမနေဘူးလား… ကိုအောင်ရဲ ။ ကျမကတော့ ကိုယ်က မှန်ပါလျက်နဲ့မှ ယောက်ျားက အပြစ်မြင်ရက်တယ်ဆိုပြီး ထိခိုက် ကြေကွဲနေမယ့် မိန်းမမျိုးမဟုတ်လေတော့ ရယ်ချင်တာပဲ သိတာပေါ့ ကိုအောင်ရဲရယ် နော … ။
ကိုဝေလင်းကို ရှင်မှတ်မိတယ်မဟုတ်လား ကိုအောင်ရဲ။ ရှင်နဲ့ကျမ အိမ်ထောင်သက် တစ်နှစ်ကျော် ကာလ၊ တိတိကျကျပြောရရင် ရှင်နဲ့ ကျမရဲ့ ပဋိပက္ခဘ၀ စနေပြီဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ (ရှင့်ကိုရွဲ့ပြီး) ကျမ ပထမဦးဆုံး တွဲခဲ့တဲ့ အမျိုးသားလေ။ ရှင် ကျမကို ကမ်းလှမ်းမလာခင်ကတည်းက သူက ကျမကို ပရိုပို့စ်လုပ်ဖူးခဲ့တာ။ နောက်ကျမှ ပြန်တွေ့၊ တွဲဖြစ်ခဲ့ကြတာ။ ကျမက သိပ်လှတယ်လို့ ကျော်ကြားတယ်မဟုတ်လား။ သူက အလှကိုးကွယ်သူလေ။ ဆိုပါတော့… သူက ကျမကိုချစ်နေတုန်းပါပဲလို့ ပြောလာတော့ ကျမကလည်း ရှင်နဲ့အဆင်မပြေလို့ စိတ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်။ ကိုဝေလင်းနဲ့ ကျမ မွေးနေ့ပွဲတွေ၊ ဧည့်ခံပွဲတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ပစ်ကနစ်တွေမှာ တွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ တွဲလာခဲ့ပြီး သုံးလ မပြည့်တပြည့်မှာ ရှင့်ကိုကွာရှင်းပြီး သူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့ တောင်းဆိုလာတယ်။ ကျမ စဉ်းစားမယ်လို့ ပြန်ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သူ ကျမအပေါ် နည်းနည်း ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ဆန်လာတယ်။ (ရှင်တို့ယောက်ျားအများစုရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ကိုအောင်ရဲ)။ ကျမဟာ ထူးပြီး ယိုယွင်း လျော့ရဲစရာမရှိတော့တဲ့ မိန်းမပဲလို့ သူယူဆပြီး ကျမခန္ဓာကို ထိပါးဖို့ ကြိုးစားလာတယ်။ ဒီတုန်းက ကျမ တော်တော် ရှက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ရှင့်ကို သတိရနေခဲ့တယ်။ ကျမ အပြင်းအထန် ငြင်းပစ်လိုက်တယ်။ သူလည်း ရှက်သွားပုံရတယ်။
ဆရာမဘ၀မှာလည်းထရီဇာက နာမည်ကျော်ပြန်တာပေါ့။ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ကဗျာလောကထဲမှာလည်း ထရီဇာဟာ မှတ်တိုင်လေးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ခဲ့တာပဲ။ ကဗျာလောကထဲမှာ ကဗျာသမားပုံစံနဲ့ နည်းနည်းလေးမှ မတူတဲ့ ကျမဟာ ထူးခြားနေခဲ့တယ်။ ရှိတဲ့မိန်းကလေး ကဗျာသည်တွေကလည်း ဆံပင်ရှည်ကြီးတွေနဲ့၊ သနပ်ခါး မလိမ်း၊ နှုတ်ခမ်းပါးနီမဆိုး၊ ရှပ်အင်္ကျီခပ်နွမ်းနွမ်းတွေနဲ့။ အဲဒီအထဲမှာ ကမ ထင်ပေါ်ခဲ့တာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါကိုပဲ ထူးဆန်းသလို လူတွေက ကြည့်ကြတယ်။ တကယ်ထူးဆန်းတာက ဒီလောက် အလှအပ ကြိုက်ပြီး ချမ်းသာတဲ့ ထရီဇာဆိုတဲ့ မိန်းမရဲ့ အသည်းနှလုံးနဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ ယောက်ျားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ ကဗျာဗီဇတွေ ရှိနေတာ။ ပြီး ရှင်တို့အဆိုအရ အင်မတန် ထက်မြက်မာကျောတဲ့၊ သွက်လက်တောက်ပတဲ့ ထရီဇာမှာ အင်မတန် သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းတဲ့ အနုသန္ဓေတွေ ရှိနေတာကမှ ထူးခြားသင့်တယ်လို့ ကျမ ထင်တယ်၊ ပြီးတော့ ကျမက အဲလိုပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ အဲသလို ထူးထူးခြားခြား မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ကျမက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပုံသွင်း မွေးမြူခဲ့တာကြောင့်လည်း ကျမရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲနိုင်အောင် (ရှင်နဲ့တောင် မလဲနိုင်အောင်) ကျမ မြတ်နိုးတွယ်ဖက်ထားတာပေါ့… ကိုအောင်ရဲရယ်။
မျက်ခွံတွေကို လက်ဖ၀ါးနဲ့ ပွတ်သုတ်ပစ် လိုက်တယ်။ ခေါင်းကို ဆတ်ကနဲ့ မော့ပစ်တယ်။ မျက်တောင်တွေကို ခဏခဏ ခတ်ပြီး စိတ်ကို တင်းတယ်။ “ရှင်တို့ ယောက်ျားတွေဟာ သိပ်ကိုရယ်ရတာပဲ”လို့ တတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်း မျက်ရည်ကို ထိန်းတယ်။ ခဏကြာ တော့ ဆောက်တည်ရာရပြီလို့ ယူဆတယ်။ အားပါးတရ အော်ရယ်နိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးပြီး ရယ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ မရဘူး။ ပြုံးကြည့်တယ်၊ ခါတိုင်းပြုံးနေကျ ထရီဇာရဲ့ နာမည်ကျော် ယုံကြည်ပြုံးလေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလွန်းတဲ့ အပြုံးပေါ့။ ပြုံးပြီး စာချုပ်ကို ထပ်ကြည့်မိတယ်။ ‘အောင်ရဲ’တဲ့။ တဘက်မှာ ‘အေးအေးဦး’ ဘယ်ဘက်ရင်အုံထဲမှာ စူးကနဲ အောင့်တယ်။ မျက်လုံးအကြည့်မှာ… အေးအေးဦး… ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေက မှုန်ဝါးသွား တယ်။
သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ ဇတ်လမ်းလေးပါပဲ ဆရာမ ။ ဖတ်ပြီး ရင်ထဲနင့်အောင် ခံစားသွားရတယ် .. ။ သမီးက ဒီလိုဇတ်လမ်းလေးတွေကို သိပ်ကြိုက်တာ ။ အရေးအသားကောင်းတဲ့ ဆရာမကို အမြဲအားပေးလေးစားနေလျက်ပါရှင် :)
ဘယ်လိုပဲ ထက်မြက်မာကျောတဲ့ မိန်းကလေးတယောက် ဖြစ်ပါစေ ချစ်စိတ်ဝင်လာရင် ချစ်သူရှေ့မှာတော့ နူးညံ့သွားတတ်စမြဲ မဟုတ်လားဟင်.. မာန အခွံပါးတွေ လုံးလုံးလျားလျား ကွာကျသွားအောင် ဘယ်အရာက လုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ..
I love this story and I think you r feminist , Saya Ma . A very strong woman with high vanity , her struggle between love and desire .. . Anyway , I love it and readable.
Thanks and add more novels.
တီတီ စာတွေကို ပီဒီအက်ဖ် လုပ်ပြီး သိမ်းချင်တယဗျ စာဖတ်ပို့ပါ
အားလုံ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျမပေးတာကို ရတဲ့အတွက်။
မင်းမင်းရေ..ကောင်းတာပေါ့။ ပြီးရင် တီတီ့ဆီလည်း ပို့ပေး.. :D
ဒါဟာ အချစ်လားကွယ်.. :P
ဟုတ်ပ ယောဆရာရေ.. ဒါကြောင့်ပဲ ကွဲရ...
အင်းးသူတို့အသက်လေးတွေသာ ဒါ့ထက်နည်းနည်းကြီးရင်တော့ ကွဲချင်မှ ကွဲမလားပဲနော်။ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ပေါ့..
ဆရာမကို အားကျလို့ အတုခိုးပြီး ၀တ္တုတိုတစ်ပုဒ်ရေး ထားတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပြီး ဝေဖန်ပေးပါဦး ။
ဆရာမရဲ့ သည်ဝတ္ထုကို ဖတ်ပြီး…ဆရာမ ဂျူးရဲ့ တဦးတည်းသောသား ၀တ္ထုကိုလည်း တဆက်တည်း သတိရမိတယ်။
ဆရာမရဲ့ ၀တ္ထုမှာတော့ မိန်းမသားတွေ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေး ရလိုတဲ့ အချက်ကလည်း ရှေ့တန်းကပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၀တ္ထုနှစ်ပုဒ်လုံးမှာ ဇာတ်ကောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သဘောထားပုံက တူတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ဆရာမ ၀တ္ထုမှာ ထရီဇာက သူ့ခင်ပွန်း ကိုအောင်ရဲအပေါ်မှာ ချစ်သလိုမျိုး၊ ဂျုးဝတ္ထုမှာ အဲလစ်ကျော်မောင် (အေးအေးကျော်)က သူမရဲ့ခင်ပွန်း အပေါ်မှာ ချစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး နှစ်ဦးစလုံးက ကိုယ့်ခင်ပွန်းအချစ်ကို တခြားမိန်းမတွေနဲ့ ခွဲဝေမယူချင်ကြဘူး ဆိုတာတွေ့ရတယ်လေ။ (ဆရာမ၀တ္ထုမှာ တခြားမိန်းမက ငယ်ရွယ်သူမိန်းကလေးတွေ ဖြစ်နေပေမယ့် ဂျူးဝတ္ထုမှာတော့ တခြားမိန်းမက သူ့ယောက္ခမ ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန် ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။း-) ) အင်း… ဒါကမိန်းကလေးအားလုံးရဲ့ သဘာဝဘဲ ထင်ပါရဲ့။
ဇာတ်ကောင်အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်စလုံးက သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ မာနကြီးကြသူတွေချည်းဘဲ။ ဆရာမ ဇာတ်ကောင်က ပိုလို့တောင် မာနကြီးသလိုဘဲ။ နောက်ပြီး အရွဲ့တိုက်တဲ့နေရာမှာ သူက ပိုပွင့်လင်း၊ ပိုလက်တွေ့ကျတယ်။ အဲလစ်ကျော်မောင်ကတော့ စိတ်ထဲကရယ်၊ နှုတ်ကဖွင့်ပြီးတော့ရယ်လောက်ဘဲ အရွဲ့တိုက်ခံတာကို တွေ့ရတယ်။
စာရေးသူ နှစ်ယောက်စလုံးက မြန်မာလိုအရေးအသား ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းသူတွေ ဖြစ်ရုံမျှမက အနုပညာကို ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ ပါရမီရှိသူတွေဆိုတော့ ၀တ္ထုနှစ်ပုဒ်စလုံးဟာ တမျိုးတဘာသာစီ ကောင်းကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကိုပေါရေ..သေချာ ဝေဖန်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မဂျူးရဲ့ အေးအေးကျော်ကတော့ ယောက္ခမကိုပြိုင်ရတာမျိုးကိုးနော်.. အဲလိုကွာမယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့ အသက်အရွယ်နဲ့ ခံစားမှုတွေ.. ဆင်ခြင်တုံတရားတွေ...ကွာမယ်ထင်တာပဲနော်.. စာရေးတဲ့သူရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လည်းဆိုင်မယ်ထင်တယ်။ ကျမက အသက်၂၂မှာရေးတာ။ မဂျူးရဲ့ တဦးတည်းသောသားက နည်းနည်း ပိုနောက်ကျတယ်ထင်တာပဲ။
B!tter SwEEt said...
(Aunty) May Nyane,
I want pdf file too. Could you please make my wish come true? :)